SPAIN – Page 8 – Garsoore Sports
Weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Braüt Haaland ayaa sheegay inuu doonayo inuu xagaaga isaga dhaqaaqo kooxda Jarmalka si uu safarkiisa xiga u tibaaxana waxa uu farta ku fiiqay kooxda uu daneynayo inuu ku biiro. Kooxaha…
Paul Pogba ayaa dhaliyay billowgii qeybtii labaad ee ciyaarta si uu uga caawiyo kooxdiisa Manchester United in ay 1:0 uga adkaato Ac Milan cayaar lugtii hore kusoo idlaatay 1:1. Pogba ayaa ka soo kacay kursiga…
Xiddiga garabka uga ciyaara Real Madrid Lucas Vazquez ayaa haatan dhageysanaya dalabyada uga imaanaya meelo kale kaddib markii wadahadalo qandaraas kordhin ah oo uu Real la lahaa uu gaaray meel xun. Vazquez, oo qandaraaskiisa haatan…
Tababaraha Kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa Hambalyo udiray ciyaartoyda Kooxda sida lagu arkay Qoraalo ay Warbaahinta ka sameeyeen. Zidane ayaa Hambalyada uu soo diray ka dambeysay markii ay garaaceen Kooxda Atalanta kadibna usoo gudbeen 8 dhamaadka…
Kooxda Ac Milan iyo Naadiga Napoli ayaa isku heysta laacib katirsan Kooxda Barcelona oo difaacyada ka mid ah. Xiddigaan Junior Firpo ayaa la isku dayey in la qaato Bishii Janaayo Sanadkaan Markii uu suuqa kala…
Xiddiga Dalka Biljimka kasoo jeeda Ee Eden Hazard ayaa Lacag Khasaartay noqday marka loo eego sida uu uwaayey wakhti ku filan uu Kooxdiisa la qaato. Laacibkii hore Ee Kooxda Chelsea Hazard ayaa dhaawacmay Markii 8aad…
Cayaaryahanka kooxda Kubbada-cagta ee Barcelona iyo xulka Argentina Lionel Messi ayaa xalay gaaray rikoor taariikhi ah kaddib kulankii ay kooxdiisa Barca xalay natiijo 4:1 ah ku dardareen kooxda SD Huesca kulan ka tirsanaa horyaalka La…
Sida ay daabaceen maanta oo sabti aheyd qaar ka mid ah warbaahinta Dalka Spain waxaa Koox Computerada udhaca ay jabsadeen Akoonadii Baraha Bulshada Kooxda Real Madrid iyo website-kooda. Weeraryahanka Kooxda Real Madrid Rodrygo Goes ayaa bartiisa…
Kooxda Barcelona ayaa heshiis afka ah la gaartay weeraryahanka kooxda Man City ee Sergio Aguero si ay xagaagan ugu soo biiriso Camp Nou heshiis laba sano ah. Aguero ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhammaadka ololahan, wuxuuna ku…
Maalin wanaagsan aqriste. Suuqii bishii Janaayo ee kala wareegga cayaartooyda ayaa ugu dambeyay suuqa kala-iibsiga cayaartooyda, hayeeshee xagaaga ayuu furmayaa suuq weyn oo cayaartooyda la isku dhaafsado, inta kasokeeysa lama joojinayo xanta ku aadan cayaartooyda…